Amilcar Cabral ၏မိန့်ခွန်း - Afrikhepri Fondation
Amilcar Cabral ၏မိန့်ခွန်း
Jကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်တည်ချက်၊ အခြေအနေနှင့်သင်ရွေးချယ်လိုသောအရာများအကြောင်းကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်အတိုချုပ်ပြောပြပါမည်။ ကျနော်တို့စိတ်အားထက်သန်ခြင်းမရှိဘဲ, ဓမ္မဓိobjective္ဌာန်လမ်းအတွက်လုပ်ချင်ပါတယ်တဲ့အကျဉ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အကယ်စင်စစ်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူသားတို့၏ဘဝ၏အဓိကဖြစ်ရပ်များ၏သမိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်များကိုမျက်ခြည်မပြတ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အတွေးအခေါ်အားလုံးအပေါ်ပေးဆပ်ရမည့်ရိုသေလေးစားမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါကကမ္ဘာကြီးသည်ဖန်တီးမှုဖြစ်သည်ကိုမမေ့ပါ။ လူသားအားကိုလိုနီကိုလိုနီဝါဒကိုသွက်ချာပါဒသို့မဟုတ်သွေဖည်ခြင်း (သို့) အခြားလူမျိုးများ၏သမိုင်းဝင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ပြည်သူ၏သမိုင်းကိုပင်ရပ်တန့်ခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပေါ်တူဂီကိုလိုနီခေတ်ကိုပြောသောအခါစက်မှုတော်လှန်ရေး မှစ၍ အရင်းရှင်စနစ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းမှဒုတိယကမ္ဘာစစ်အထိလူသားတို့၏ဘဝကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်သည့်အခြားဖြစ်ရပ်များနှင့်ခွဲခြား။ မရပါ။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုန်းကန်မှုအကြောင်းပြောသောအခါလူသားတို့၏ဘဝ၊ အထူးသဖြင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်အာဖရိက၏ထူးခြားသောဖြစ်ရပ်များမှ ခွဲခြား၍ မရပေ။ ဒီကာလကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိသေးတယ်။ ငါတို့အသက်ကြီးလာပြီ။
လစ္စဘွန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အချို့ကျောင်းသားများတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကမ္ဘာကိုလှုပ်ခါနေသောရေစီးကြောင်းများ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရပြီးယနေ့တစ်နေ့သို့မဟုတ်တစ်ခြားအခြားတစ်ခြားအကြောင်းများကိုဆွေးနွေးရန်စတင်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်ကောင်းစွာမှတ်မိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကိုပြန်လည်အာဖရိကန်။ ဟုတ်တယ်၊ တချို့သူတွေဒီအခန်းထဲမှာရှိတယ်။ ထို့ပြင်ချစ်လှစွာသောမိတ်ဆွေများသည်ပေါ်တူဂီကိုလိုနီစနစ်၏နောက်ပြန်အင်အားစုများအပေါ်ပြင်းထန်သောအောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်ဒီမှာသင် Vasco Cabral ကြားတွင်ရှိသငျသညျ Agostinho Neto မာရီယိုက de Andrade, Marceline လုပ်ဆောင်စရာဆန်းတို့နှင့်အတူ, သငျသညျသငျတို့တှငျဒေါက်တာ Mondlane ရှိသည်။
လစ္စဘွန်းရှိကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၊ အချို့သည်အမြဲတမ်း၊ အချို့သည်ယာယီအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤချီတက်ပွဲကိုစတင်ခဲ့သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းသန်းနှင့်ချီသောအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးများ၊ သန်းနှင့်ချီသောစစ်သားများသည်ဒီမိုကရေစီ၊ လွတ်လပ်မှု၊ တိုးတက်မှု၊ စံပြပုဂ္ဂိုလ်၊ လူတို့သညျ။
ဒီစစ်ပွဲမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့သူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ကမ္ဘာကြီးအတွက်မျှော်လင့်ချက်၊ မျှော်လင့်ချက်ရှိကြောင်းကိုလည်းငါတို့သိပါတယ်။ ဒီမျှော်လင့်ချက်ကငါတို့အားလုံးကိုပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်သူ၊
ဒါပေမယ့်ဒီပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ငါတို့လူမျိုးတွေရဲ့ဘ ၀ ရဲ့ခိုင်မာသောအခြေအနေတွေ၊ ဒုက္ခဆင်းရဲ၊ မသိမှု၊ အမျိုးမျိုးသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေ၊ ငါတို့ရဲ့အခြေခံအကျဆုံးအခွင့်အရေးတွေကိုလုံး ၀ ကင်းကင်းဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်တာပဲ။ အာဏာရှင်
ကျနော်တို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး, ကျနော်တို့အများကြီးအဖွဲ့အစည်းများဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ဒီအဖွဲ့တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုလိုနီနယ်ချဲ့လှုပ်ရှားမှု၊
တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် MAC ၏ကျော်ကြားထင်ရှားသောသမိုင်းဝင်စာတမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေလိမ့်မည်။ ထိုနေရာသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပေါ်တူဂီကိုလိုနီဝါဒကိုဆန့်ကျင်။ အောင်ပွဲဆင်နွဲနေကြသောတိုက်ပွဲ၏အထွေထွေမျဉ်းကိုသင်တွေ့နိုင်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ပေါ်တူဂီကိုလိုနီစနစ်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေကြသည်။ မည်သည့်ရုန်းကန်မှုတွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့မည်သူဖြစ်ကြောင်း၊ မည်သူသည်ရန်သူဖြစ်သည်ကိုရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၊ ပေါ်တူဂီကိုလိုနီများ၏လူမျိုးများသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာနှင့်အချို့သောရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်နယ်ချဲ့ဝါဒနှင့်ကိုလိုနီစနစ်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုခံနေရသောဤအာဖရိကရှိအာဖရိကလူမျိုးများဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့နယ်ချဲ့ဝါဒီများက Black Africa ကိုခေါ်ခဲ့တဲ့အာဖရိကရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့လူမည်းဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုအခြားတူသောလူဖြစ်ကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံများတွင်စီးပွားရေးအရနောက်ပြန်နိုင်ငံများဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူ၌ရှိကြ၏
ကျနော်တို့ဒီသတိထားရပေမည်။ ငါတို့တွေဟာအာဖရိကလူမျိုးတွေပါ၊ များစွာသောအရာတွေကိုမတီထွင်ခဲ့ဘူး၊ ဒီနေ့မှာအခြားသူတွေမှာအထူးလက်နက်မရှိဘူး၊ စက်ရုံကြီးတွေလည်းမရှိဘူး၊ ငါတို့မှာလည်းမရှိဘူး။ ငါတို့ရဲ့ကလေးများ၊ အခြားကလေးများရှိသည့်ကစားစရာများ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံး၊ ဦး ခေါင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းရှိသည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သရုပ်ပြမည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သမိုင်းကြောင်းမှမိမိတို့၏သမိုင်းမှထုတ်ပယ်ရန်၊ သူတို့၏ရထား၊ နောက်ဆုံးနေရာ၌သူတို့၏သမိုင်း၏ရထားတွင်သူတို့ကိုလိုက်ရန်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုလွတ်မြောက်ရန်လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်ရန်လက်နက်ကိုင်ဆောင်သောအခြားလူမျိုးများ၏ပုံသက်သေကိုလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်း၊ ကိုယ့်ခြေထောက်၊ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နှင့်ကိုယ်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းကိုပြန်လိုကြသည်။ ပေါ်တူဂီကိုလိုနီစနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသောအာဖရိကလူမျိုးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးအခြေအနေများခံစားခဲ့ရပြီး၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းလေးဆယ်အတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖက်ဆစ်အစိုးရ၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်ရောက်နေခဲ့ရသည်။
ဘာကိုဆိုလိုတာလဲခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိတယ် Cape Verde မှ Mozambique အထိ၊ San Thoméမှ Angola အထိအိမ်မှာနိုင်ငံရေး၊ ပြည်ထောင်စုဒါမှမဟုတ်တခြားလွတ်လပ်ခွင့်တွေတစ်ခါမှမရခဲ့ဘူး။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေကိုကိုလိုနီစနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်သောအခြားအာဖရိကလူမျိုးများနှင့်ကွဲပြားခြားနားစွာကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လျှို့ဝှက်ရုန်းကန်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်၊ ဤအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုများ၊ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ရန်နှင့်ယနေ့နောက်ဆုံးအခြေအနေအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှု၏ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်ဤတွင်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ပေါ်တူဂီကိုလိုနီစနစ်ဆန့်ကျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုန်းကန်။
ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေများနည်းတူကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံခြားလွှမ်းမိုးမှုကိုဆန့်ကျင်ပုန်ကန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ယနေ့ကမ္ဘာ့လူအများကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုန်ကန်မှုအတွက်တရား ၀ င်အခြေခံဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုလသမဂ္ဂပCharterိညာဉ်စာတမ်းရှိသည်။ ကုလသမဂ္ဂပtheိညာဉ်စာတမ်းမလုံလောက်လျှင်၊ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်တိုင်လုံလောက်မှုမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုးများသည်သူတို့၏မွေးရာပါမြေဆီလွှာမှနေ့စဉ်ပေါ်တူဂီကိုလိုနီစနစ်ဖြင့်သူတို့၏ကိုယ်ကျိုးစွန့်မှုများကြောင့်ထာဝရမောင်းထုတ်ရန်လုံလောက်သည်။
ငါတို့ကိုလွှမ်းမိုးသောဤရန်သူကားမည်သူနည်း၊ ငါတို့ကိုအနိုင်အထက်တည်။ ၊ ယနေ့ဥပဒေများ၊
ဤရန်သူသည်ပေါ်တူဂီလူမျိုးမဟုတ်ပါ၊ ပေါ်တူဂီကိုယ်တိုင်ပင်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပေါ်တူဂီကိုလိုနီများ၏လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်သူများသည်ဤရန်သူမှာပေါ်တူဂီကိုလိုနီနယ်ချဲ့ပေါ်တူဂီပေါ်တူဂီအစိုးရ၏ကိုယ်စားပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ပေါ်တူဂီ၊ ချစ်လှစွာသောမိတ်ဆွေများသည်စီးပွားရေးအရနောက်ပြန်ရောက်နေသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေ၏ ၅၀% ခန့်သည်စာမတတ်သည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဥရောပ၏စာရင်းအင်းအားလုံးတွင်နောက်ဆုံးနေရာ၌သင်အမြဲတွေ့လိမ့်မည်။
သမိုင်းကြောင်းအရတစ်ချိန်တည်း၌သူတို့၏တန်ဖိုး၊ သတ္တိ၊ စွမ်းရည်နှင့်ယနေ့အချိန်၌ပင်အရည်အချင်းရှိသောကလေးများ၊ ကလေးများ၊ ကလေးသူငယ်များကိုပြသခဲ့သည့်ပေါ်တူဂီလူမျိုးများ၏အမှားမဟုတ်ပါ သူတို့၏ပြည်သူတို့၏လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုပြန်လည်ရယူလိုကြသည်။
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံသည်မည်သည့်နိုင်ငံကိုမှလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်မရှိသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပေါ်တူဂီသည်ဘုရားသခင့်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုခံယူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့လာခဲ့သည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏လက်ထဲတွင်လက်နက်ဖြင့်အဖြေပေးသည်။ ပေါ်တူဂီကိုလိုနီများနှင့်ဘုရားသခင်မည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ ပေါ်တူဂီကိုလိုနီနယ်ချဲ့များသည်မည်သည့်ယဉ်ကျေးမှုကိုမဆိုလက်ခံသည်။ ။ ငါပေါ်တူဂီကိုလိုနီစနစ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ်အများကြီးမနေပါလိမ့်မယ်။ ယနေ့ပေါ်တူဂီကိုလိုနီခေတ်ကိုအခြေခံကျကျအခြေခံအဆောက်အအုံသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ပေါ်တူဂီကိုလိုနီစနစ် (သို့မဟုတ်သင်နှစ်သက်လျှင်ပေါ်တူဂီစီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အအုံ) သည်နီကိုလိုနီဝါဒကိုကျင့်သုံးရန်ဇိမ်ခံခြင်းကိုမပေးနိူင်ပါ။ ပေါ်တူဂီကိုလိုနီနယ်ချဲ့ဝါဒကိုကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုးများအပေါ်ထားရှိသောသဘောထားအားလုံးနားလည်နိုင်သည်။
သို့သော်များစွာသောလူများက Salazar ကိုဝေဖန်ကြသည်, Salazar အကြောင်းကိုမကောင်းတဲ့အရာကပြောပါတယ်။ သူကအခြားမည်သည့်လူမဆို သူ၌အမှားများစွာရှိသည်၊ သူသည်ဖက်ဆစ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်၊ သူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့မုန်းသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည် Salazar ကိုတိုက်ခိုက်နေခြင်းမဟုတ်ပဲကျွန်ုပ်တို့သည်ပေါ်တူဂီကိုလိုနီစနစ်ကိုတိုက်ခိုက်နေသည်။ Salazar ပျောက်ကွယ်သွားသည့်အခါပေါ်တူဂီကိုလိုနီခေတ်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အိပ်မက်မက်သည်မဟုတ်ပါ။
ဒါကြောင့်ဒီအခြေခံလက္ခဏာရဲ့အခြေခံပေါ်မှာပေါ်တူဂီကိုနီကိုလိုင်နီယိုဝါဒမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပေါ်တူဂီအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဘက်မှနားလည်မှုကိုတောင်းဆိုဖို့အမြဲငြင်းဆန်ခဲ့တယ် ပေါ်တူဂီ၊ အန်ဂိုလာ၊ မိုဇမ်ဘစ်နှင့်၎င်းကိုအခြားကိုလိုနီနယ်ပယ်များတွင်ပြုလုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ၊ အာဖရိကနှင့်လူသားဆန့်ကျင်သောကိုလိုနီစစ်ပွဲဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ငြိမ်းချမ်းသောလူမျိုးများဖြစ်သော်လည်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းကြောင့်ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာဖြင့်၊ ၂၀ ရာစုတိုးတက်မှု၏စိတ်ကူးကိုစွဲလမ်းခြင်းကြောင့်ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာဖြင့်လက်နက်ကိုင်ချီတက်ခဲ့သည်။ ငါတို့အတွက်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကမ္ဘာမှာဥပဒေမရှိဘူးဆိုတာပဲ။ ငါငြိမ်းချမ်းတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်၊ စစ်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုမင်းအာရုံစိုက်စေချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်စစ်၊ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဟာပေါ်တူဂီကိုလိုနီဝါဒကငါတို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားဂုဏ်သိက္ခာ၊ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာကပေါ်တူဂီအစိုးရကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီဟာကစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုများစွာပါ ၀ င်ပေမယ့်လည်းပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ငါတို့ဟာစစ်ပွဲဆင်နွှဲသူများမဟုတ်ကြဘူး၊ ငါထပ်ခါတလဲလဲစစ်ပွဲကိုမကြိုက်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ငါတို့တွေ့မြင်ရပြီး၊ ဥပမာအားဖြင့်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲကလွတ်လပ်သောအနာဂတ်အတွက်ခိုင်မာသောအခြေအနေများဖန်တီးပေးသည် အချို့သောအတားအဆီးများသည်အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးသူငယ်များပင်လျှင်နိုင်ငံရေးကိုပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုနောက်ပြန်လှည့်ကာတစ်ခါတစ်ရံတွင်အဝတ်အချည်းစည်းမရှိဘဲနေထိုင်ခြင်း၊ အရေးမဖတ်တတ်ခြင်း၊ ခေတ်မှီနည်းပညာ၏အခြေခံအချက်အလက်များပင်မသိသောသူများသည်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိကြောင်းသက်သေပြနေသည်။ သူတို့၏စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုနှင့်အားထုတ်မှုအားဖြင့်ရန်သူအားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပိုမိုတိုးတက်စေရန်သာမကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအင်အားကြီးအင်အားစုများကပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည်။
အလုပ်လုပ်မှ, တိုးတဘဝပိုင်ခွင့်, ခုခံကာကွယ်ဖို့, မိမိနိုင်ငံကခုခံကာကွယ်ဖို့လက်နက်ကိုတက်ယူသူတစ်ဦးကပေးထားသောကြောင့် မှလွဲ. ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအရှိဆုံးတောက်ပပေါ်ထွန်းခြင်းကားအဘယ်သို့နှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုမှကျနော်တို့ကိုမေး?
ကျွန်ုပ်တို့၊ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုများသည် CONCP တွင်ပေါင်းစည်းထားသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲသည်ဖိနှိပ်ခံပြည်သူများ၏နယ်ချဲ့ဝါဒကိုဆန့်ကျင်သောအထွေထွေရုန်းကန်မှု၊ လူသားဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ကြိုးပမ်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းသတိပြုရမည်။ လွတ်လပ်မှုနှင့်တိုးတက်မှုတို့အတွက်။ ဤမူဘောင်အတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ရုန်းကန်မှုကိုပေါင်းစည်းနိုင်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုစစ်သားများဟုအကြိမ်ပေါင်းများစွာအမည်မဖော်ဘဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ သို့သော်ယနေ့အာဖရိကတိုက်ဖြစ်သောကျယ်ပြန့်သောတိုက်ပွဲတွင်လူသားစစ်သားများ
CONCP တွင်ကျွန်ုပ်တို့အာဖရိကတွင်တိုက်ခိုက်နေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အာဖရိကသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတိမြေဖြစ်သော်လည်းလူအားလုံး၏တိုးတက်မှုအတွက်လူသားဂုဏ်သိက္ခာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရန်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအဆင်သင့်ဖြစ်နေလိမ့်မည်။ လူ၏ပျော်ရွှင်မှုအတွက်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုး၊ အာဖရိကနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကမ္ဘာနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနေအထားကိုမည်သို့ရှင်းလင်းစွာရှင်းလင်းရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ညီလာခံတွင်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်ပြောနိုင်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် CONCP မှကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုးများနှင့်ကတိက ၀ တ်ပြုခြင်း၊ ငါတို့လူမျိုးများစုစုပေါင်းလွတ်မြောက်မှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေသော်လည်းတိုက်ခိုက်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါတို့တိုင်းပြည်မှာအလံတစ်ခုတင်ပြီးနိုင်ငံတော်သီချင်းလုပ်ဖို့ပဲ။ CONCP တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရာစုနှစ်ချီအာဇာနည်များ၊ မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း၊ စော်ကားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်များတွင်စော်ကားမှုကိုဘယ်သောအခါမျှလွှမ်းမိုးနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်သူများသည်နယ်ချဲ့ဝါဒီများသာမကဘဲပြည်သူများကိုအမြတ်ထုတ်ရန်ဘယ်တော့မှမလိုလားကြောင်းကိုလိုလားသည်။ ဥရောပသားတွေ၊
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း (သို့) ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းများကိုလူတွေရဲ့အရေပြားအရောင်နဲ့မရောထွေးစေလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာလူမည်းတွေတောင်မှအိမ်မှာအမြတ်ထုတ်ဖို့မလိုချင်ဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံများ၊ အင်ဂိုလာ၊ မိုဇမ်ဘစ်၊ ဂီနီ၊ ကိပ်ဗာဒီ၊ စန်းသောမွန်၊ ပျော်ရွှင်သောဘဝတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တိုက်လှန်နေကြသည်။ လူတိုင်းလူတိုင်းသည်စည်းကမ်းမချမှတ်ရသည့်လူအားလုံး၏လေးစားမှုကိုခံရလိမ့်မည်။ မည်သူမျှယောက်ျား၏ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ဖန်တီးသောလုပ်ခသည်မျှတလိမ့်မည်၊ လူဖန်တီးခဲ့သောအရာအားလုံးကိုလူတိုင်းရပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အလုပ်ကိုလက်လွှတ်လိမ့်မည်။
ဒါကငါတို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာပါ။ ငါတို့အဲဒီကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်ငါတို့ရုန်းကန်ရတဲ့ရည်မှန်းချက်မှာတာဝန်တွေပျက်ပြားသွားလိမ့်မယ်။ ငါတို့ပြောချင်တာကအာဖရိကကိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်ငါတို့ CONCP မှာရှိမယ်၊ အာဖရိကရဲ့ကံကြမ္မာကိုယုံကြည်တယ်။ အာဖရိကမှာကျွန်ုပ်တို့မှာစံနမူနာကောင်းတွေရှိတယ်၊ အာဖရိကမှာလည်းမလိုက်နာသင့်တဲ့ဥပမာတွေရှိတယ်။ ထို့ကြောင့်အာဖရိကသည်ယနေ့ခေတ်တွင်စံနမူနာကောင်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နက်ဖြန်နေ့၌ကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုးများ၏အကျိုးစီးပွားကိုသစ္စာဖောက်မည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့မသိသောကြောင့်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။
ကိုလိုနီဝါဒသည်နယ်ချဲ့ဝါဒ၏လက်နက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသောကြောင့်အာဖရိကတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အာဖရိကတိုက်ကြီးကိုကိုလိုနီခေတ်ထမ်းပိုးမှလုံးလုံးလွတ်မြောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နယ်ချဲ့ဝါဒ၏ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုအားလုံးကိုအာဖရိက၏မြေဆီလွှာများမှဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်ကိုတွေ့မြင်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် CONCP တွင်နီကိုလိုနီစနစ်ကိုမည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆိုဆန့်ကျင်စွာအပြင်းအထန်ဆန့်ကျင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရုန်းကန်မှုသည်ပေါ်တူဂီကိုလိုနီစနစ်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ပွဲအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှထာဝရမောင်းထုတ်ရန်အထိရောက်ဆုံးသောနည်းလမ်းဖြင့်ပါဝင်စေလိုသည်။ ကျနော်တို့အာဖရိကမှာစည်းလုံးညီညွတ်မှုရဖို့အာဖရိကမှာရှိပေမယ့်အာဖရိကလူမျိုးတွေရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုကြောင့်အာဖရိကန်စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုရရှိခဲ့တယ်။ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုအဆုံးမဟုတ်၊ စည်းလုံးမှုကခိုင်မာအားကောင်းစေသည်၊ ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်၊ ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်အာဖရိကန်စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
အာဖရိကလူမျိုးများ၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောကြိုးပမ်းမှုများကြောင့်၎င်းသည်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ဒါဟာအာဖရိက၏ဝန်ဆောင်မှု, လူသား၏ဝန်ဆောင်မှုထံသို့ရောက်လိမ့်မည်။ CONCP တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ကြီး၏ကြွယ်ဝမှု၊ လူ့ကျင့်ဝတ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုစွမ်းရည်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုလုံးသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ CONCP တွင်အပြည့်အ ၀ ယုံကြည်စိတ်ချသည်။ ၎င်းသည်ကြွယ်ဝသော၊ သိသိသာသာကြွယ်ဝသောလူ့နေရာကိုဖန်တီးရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ယင်း၏အပိုင်းသည်လူသားထုကိုပိုမိုကြွယ်ဝစေမည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏အိပ်မက်ကို၎င်းင်း၏အောင်မြင်မှုများတွင်အာဖရိကလူမျိုးတစ် ဦး ချင်းစီ၏အကျိုးစီးပွားကိုဖော်ပြရန်မလိုချင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂီနီနှင့်ကိပ်ဗာဒီကျွန်းစုများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပါတီအစီအစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အာဖရိကန်လူမျိုးများနှင့်ပေါင်းစည်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြေငြာခဲ့ပြီး၊ အောင်မြင်မှုများ၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအကျိုးအမြတ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသောတရားမျှတမှုအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ငါတို့တဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်နားလည်လာသည်၊ ဤအရာအားလုံးကိုအခြားသူများနှင့်ယူနစ်များကမထိခိုက်စေနိုင် လူမျိုး။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အာဖရိကတိုက်တွင်အာဖရိကလူမျိုးများနှင့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီ၏အကျိုးစီးပွားကို ဦး စွာကာကွယ်ရန်ရှာကြံသည့်အာဖရိကမူဝါဒတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ၏အကျိုးစီးပွား၊ လူသားအားလုံး၏အကျိုးစီးပွားကိုဘယ်တော့မျှမမေ့သောမူဝါဒတစ်ခုအတွက်ဖြစ်သည်။ ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အာဖရိကတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်လစီနှင့်ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအားလုံးနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် CONCP ၏ညှိနှိုင်းမှုမရှိသောမူဝါဒကိုကာကွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းတွင်ဤအဆင့်၌ကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုးများ၏အကျိုးစီးပွားကိုအကောင်းဆုံးမူဝါဒကဤမူဝါဒဖြစ်သည်။ ဒါကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ညှိနှိုင်းမှုမရှိခြင်းသည်လူသားတို့၏အခြေခံပြproblemsနာများ၊ ညှိနှိုင်းမှုမရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုပ်ကွက်များနှင့်မထိတွေ့ရန်၊ သူတစ်ပါး၏ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိုးရိမ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်အခြားသူများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်တိုက်ဆိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှားမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ညှိနှိုင်းမှုမရှိသောပေါ်လစီအတွက်ရည်ရွယ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုးများအပေါ်နက်ရှိုင်းစွာကတိက ၀ တ်ပြုသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူသားတို့၏ကောင်းကျိုးအတွက်တိုက်ခိုက်နေသည့်ကျယ်ပြန့်သောရှေ့တန်းမှအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မြင်ကြသည်။
မင်းတို့နားလည်တာက 'ငါတို့လူမျိုးတွေအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးတိုက်ခိုက်တယ်။ ဒါကငါတို့ရဲ့ရုန်းကန်တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ပဲ။ ဤသည်စည်းလုံးညီညွတ်မှု၏ပြaနာတစ်ခုလုံးဆိုလို။ ကျနော်တို့ CONCP မှာကျနော်တို့တရားမျှတတဲ့အကြောင်းမရှိနှင့်အတူပြင်းထန်စွာဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် FRELIMO၊ MPLA၊ PAIGC, CLSTP၊ CONCP နှင့်ဆက်နွယ်သောအစုလိုက်အပြုံလိုက်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားများသည်ဗီယက်နမ်ညီအစ်ကိုများ၏စိတ်နှလုံးနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်စွာတစည်းတလုံးတည်းဖြစ်နေကြသည်။ ဗီယက်နမ်၏ငြိမ်းချမ်းသောပြည်သူများအပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနယ်ချဲ့ဝါဒီများ၏အရှက်တကွဲဆုံး၊ ကွန်ဂိုနိုင်ငံကညီအစ်ကိုတွေရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကခံစားခဲ့ရတယ်။ ဤကျယ်ပြန့်ပြီးကြွယ်ဝလှသောအာဖရိကနိုင်ငံ၏ခြုံပုတ်သည်နယ်ချဲ့ဝါဒီများ၏ကျူးကျော်မှုနှင့်နယ်ချဲ့ဝါဒီများ၏ကစားနည်းများအားဖြင့်သူတို့၏ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားသည်။ ထို့ကြောင့် CONCP တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Tshombe၊ အာဖရိကရှိ Tshombe အားလုံးကိုဆန့်ကျင်သည်ဟုကြွေးကြော်ကြသည်။
ကျူးဘားရှိကျွန်ုပ်တို့၏ညီအစ်ကိုများနှင့်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားများသည်ပင်လယ်ဝိုင်းရံထားသည့်တောင်မှလူများသည်၎င်းတို့၏အခြေခံအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန်၊ လက်ချင်းယှဉ်။ အောင်မြင်စွာသူတို့၏အခြေခံအကျိုးစီးပွားနှင့်သူတို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ရန်စွမ်းရည်ရှိကြောင်းပြသခဲ့ကြ မိမိအကြမ္မာ၏။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူမည်းများနှင့်အတူရှိနေပြီးလော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်၏လမ်းများပေါ်တွင်သူတို့နှင့်အတူရှိနေပြီး၎င်းတို့သည်မည်သည့်ဘဝဖြစ်နိုင်ခြေမှဖယ်ထုတ်လိုက်သည့်အခါသူတို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ဒုက္ခရောက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပါလက်စတိုင်းမှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသည့်ဒုက္ခသည်များ၊ ပါလက်စတိုင်းမှဒုက္ခသည်များနှင့်အတူပါ ၀ င်ပြီးနယ်ချဲ့ဝါဒ၏အပြုအမူအားဖြင့်သူတို့၏ဇာတိမြေမှနှင်ထုတ်ခံခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်များနှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိပြီးပါလက်စတိုင်းသားများသည်သူတို့၏တိုင်းပြည်ကိုလွတ်မြောက်စေရန်လုပ်ဆောင်နေသမျှကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ထောက်ခံပြီးအာရပ်နိုင်ငံများနှင့်အာဖရိကနိုင်ငံများအားယေဘူယျအားဖြင့်ကူညီရန်စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ထောက်ခံ သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ၊ လွတ်လပ်ရေးနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေ။
ပြင်သစ် (ဆိုမာလီကမ်းခြေ) ဟုသိကြသောဆိုမာလီယာ၊ စပိန်ဟုလူသိများသောဂီနီယာနိုင်ငံများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီးနာကျင်ဖွယ်ကောင်းသောနည်းဖြင့်အာဖရိကန်ကျွန်ုပ်တို့၏ညီအစ်ကိုများနှင့်အတူရှိနေသည်။ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအရှိဆုံးလူမျိုးစုခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုရင်ဆိုင်ရသောတောင်ပိုင်းမှဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပေါ်တူဂီကိုလိုနီနယ်မြေအတွင်းရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပေါ်တူဂီကိုလိုနီစနစ်ကိုနေ့တိုင်းအနိုင်ရသောအောင်မြင်မှုသည်ရှက်ဖွယ်ကောင်းသောလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုဖယ်ရှားရာတွင်ထိရောက်သောပံ့ပိုးမှုဖြစ်သည်။ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုတောင်အာဖရိက။ ထို့အပြင်တောင်အာဖရိကမှဝေးသောမဝေးနက်၊ မနက်ဖြန်၊ မနက်ဖြန်၊ မနက်ဖြန်ကဲ့သို့သောသူများသည်၊ တောင်အာဖရိကမှဝေးသောဂီနီနှင့်ကိပ်ဗားဒ်ရှိလူများကဲ့သို့သောသူများသည်မနက်ဖြန်၊ မနက်ဖြန်ကစားနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ တောင်အာဖရိကရှိကိုလိုနီစနစ်၊ နယ်ချဲ့ဝါဒနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနောက်ဆုံးသောခံတပ်အားအပြီးသတ်ဖျက်သိမ်းရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ far သည်ဝေးလံသောဒေသမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိတရားမျှတမှုမှန်သမျှနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်စွာရပ်တည်သော်လည်းအခြားသူများ၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုကကျွန်ုပ်တို့၌အားတက်စေသည်။ လူများစွာ၊ မိတ်ဆွေများစွာ၊ ညီအစ်ကိုများစွာ၏ခိုင်မာသောအကူအညီကိုကျွန်ုပ်တို့ရထားကြသည်။
ငါပြောချင်တာကငါတို့ CONCP မှာအခြေခံနိယာမရှိတယ်၊ ငါတို့ကိုယ်ပိုင်ကြိုးပမ်းမှုတွေ၊ ငါတို့ရဲ့ကိုယ်ကျိုးစွန့်မှုတွေကိုအားကိုးဖို့ဖြစ်တယ်။ သို့သော်ပေါ်တူဂီကိုလိုနီနယ်ချဲ့မှုအခြေအနေ၊ ချစ်လှစွာသောမိတ်ဆွေများနှင့်လက်ရှိလူသားသမိုင်း၏သမိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုန်းကန်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိထားကြသည်။ ၎င်းသည်အာဖရိကအားလုံး၏တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် CONCP တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုန်းကန်မှု၏အထူးအခက်အခဲများကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးလက်ရှိသမိုင်းကြောင်းအရရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခိုင်မာသောအကူအညီများလိုအပ်ကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်။ ငါတို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အာဖရိကရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိတိုးတက်သောအင်အားစုအားလုံးထံမှခိုင်မာသောအကူအညီဖြစ်သည်။ မည်သည့်အကူအညီကိုမဆို၎င်းသည်မည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအကူအညီကိုမည်သူ့ကိုမျှမတောင်းခံပါ။ ငါတို့ရုန်းကန်မှုကိုလူတိုင်းယူဆောင်လာနိုင်သောအကူအညီကိုသာကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ ဒါကငါတို့ရဲ့အကူအညီပေးရေးကျင့်ဝတ်ဖြစ်တယ်။ ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတွေမှာခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာဒီနေရာကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့ပြောချင်တယ်။ အာဖရိကလူမျိုးတွေဟာငါတို့ရဲ့ညီအစ်ကိုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာငါတို့အားလုံးသိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုန်းကန်မှုသည်သူတို့ဖြစ်သည်။ ဒီအာဖရိကလူမျိုးတွေဟာငါတို့မြေပေါ်ကျကျကျဆင်းနေတဲ့သွေးတစ်မျိုးစီဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဖရိကညီအစ်ကိုတွေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့နှလုံးသားထဲကနေကျဆင်းလာတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေး မှစ၍ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ရပ်များအပြီးတွင်ကမ္ဘာကြီးသည်လုံးလုံးပြောင်းလဲသွားသည်ကိုငါတို့သိသည်။ ဆိုရှယ်လစ်စခန်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အာဏာချိန်ခွင်လျှာကိုလုံး ၀ ပြောင်းလဲသွားစေပြီးဒီဆိုရှယ်လစ်စခန်းသည်ယနေ့အချိန်၌ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံများမှပြည်သူများသည်ကိုလိုနီလူမျိုးများအားအမြတ်ထုတ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်နိုင်ငံတကာ၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများ၊
သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့တာ ၀ န်ကိုသိတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့အကူအညီကိုအားဖြည့်ဖို့လာတဲ့ဒီနိုင်ငံတွေဆီကနေထိရောက်တဲ့၊ ထိရောက်တဲ့အထောက်အပံ့တွေရရှိခဲ့တယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရတာကိုငါဂုဏ်ယူတယ်။ ငါတို့အာဖရိကညီအစ်ကိုတွေ။ ဒီသတင်းကိုကြားချင်တဲ့လူတွေရှိရင်ငါတို့ရုန်းကန်မှုမှာသူတို့ကိုကူညီပေးပါ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကငါတို့အချုပ်အခြာအာဏာကိုဂုဏ်ယူတယ်ဆိုတာသေချာတယ်။ ငါတို့ရဲ့အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းမယ်။ လူတိုင်းဆီကအကူအညီရတယ်။
ပြီးတော့ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့လက်ခံရရှိမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့သူတို့ဟာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်း၊ ဒီအခန်းထဲမှာဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတွေရဲ့မိတ်ဆွေတွေအဖြစ်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။ ငါဆိုဗီယက်ယူနီယံနှင့်တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ယူဂိုဆလားဗီးယားနှင့်ယူဂိုဆလားဗီးယားနိုင်ငံများမှကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ပြောဆိုရန်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမည်မဟုတ် ဂျာမန်ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံသည်ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံများမှကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုကိုယ်စားပြုသောအလုပ်လုပ်သောလူမျိုးများကိုသူတို့ကြင်ကြင်နာနာပြောပြရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ သူတို့၏ရုန်းကန်မှုအပေါ်သူတို့၏ခိုင်မာသောအထောက်အပံ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ပြီးတော့ငါတို့ကိုမကြားချင်တဲ့သူတွေဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတွေကငါတို့ကိုကူညီတယ်လို့ဘာပြောကြလဲ။
သူတို့ကပေါ်တူဂီ, Salazar ၏ကိုလိုနီဖက်ဆစ်အစိုးရကူညီပေးသည်။
ယနေ့တွင်ပေါ်တူဂီ၊ ပေါ်တူဂီအစိုးရတွင်၎င်းတွင်မရှိလျှင်၊ နေတိုးမဟာမိတ်များယူဆောင်လာသည့်အကူအညီမရရှိနိုင်လျှင်လျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါ ငါတို့ကိုမနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်နေတိုးရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်။
ဟုတ်တယ်၊ နေတိုးတပ်ဖွဲ့သည်အနောက်နိုင်ငံများ၏အကျိုးစီးပွား၊ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများကိုကာကွယ်ပေးသောစစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ နေတိုးသည်ခိုင်မာသောနိုင်ငံများ၊ အစိုးရများ၊
နေတိုးသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေလက်နက်အမြောက်အများကိုကျွန်တော်တို့ယူသွားခဲ့တယ်။ နေတိုးသည်ဂျာမနီပြည်ထောင်စုဖြစ်သည်။ ပေါ်တူဂီစစ်သားတွေဆီကနေ Mausers ရိုင်ဖယ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ နေတိုးသည်အနည်းဆုံးယခုအချိန်တွင်ပြင်သစ်ဖြစ်သည်။ ငါတို့နှင့်အတူ "Alouettes"၊ ရဟတ်ယာဉ်များရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့က Alouettes ကိုစတင်ပစ်ခဲ့တယ်။ နေတိုးသည်လွတ်လပ်ရေးကိုချစ်မြတ်နိုးမှု၏ဥပမာများစွာကိုပေးဆပ်နိုင်ခဲ့သည့်ထိုသူရဲကောင်းများ၏အစိုးရဖြစ်ဆဲဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ငါတို့အတွက်အရမ်းကောင်းတယ်၊ အီတလီကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကအီတလီကညီအစ်ကိုတစ်ယောက်ကိုကြားရတာအားတက်စရာပဲ အဘယ်သူသည်အီတလီကိုယ်စားကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ မနေ့ကဒီမှာလာပြောခဲ့တဲ့ငါတို့ညီကိုကျွန်တော်တို့ကိုအီတလီလူမျိုးတွေကိုနေတိုးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အီတလီပြည်နယ်နဲ့ရောထွေးမသွားစေချင်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီတွင်အခြားမဟာမိတ်များရှိသေးသည်။ တောင်အာဖရိက၊ တောင်ပိုင်းရိုဒီးရှားမှစမစ်၊ ဖရန်ကို၏အစိုးရဖြစ်သည်၊ အခြားထင်ရှားသောမဟာမိတ်များကသူတို့မျက်နှာကိုဖုံးကွယ်ထားကြသည်။ ကကိုယ်စားပြုအရှက်ကွဲခြင်းမပြုမီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူ ဦး ရေကိုသတ်ဖြတ်ရန်အတွက်ဆလာဇာအစိုးရမှကျွန်ုပ်တို့၏လူ ဦး ရေကိုသတ်ရန်၊ အင်ဂိုလာ၊ မိုဇမ်ဘစ်၊ ဂီနီ၊ ကိပ်ဗာဒီ၊ စန်းသောမွန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရွာများကိုမီးရှို့ရန်၎င်းအကူအညီများသည်မအောင်မြင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲကိုရပ်တန့်။ ဆန့်ကျင်တွင်, နေ့စဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏တပ်ဖွဲ့များကပိုအစွမ်းထက်ဖြစ်ကြသည်။
ချစ်လှစွာသောသူငယ်ချင်းများ၊ ငါတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ခွန်အားဟာတရားမျှတမှုစွမ်းအား၊ တိုးတက်မှုရဲ့အင်အား၊ သမိုင်းရဲ့အင်အား၊ နှင့်တရားမျှတမှု, တိုးတက်မှု, သမိုင်းကလူများ၏ prerogative ဖြစ်ကြသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့အားသာချက်ကငါတို့လူမျိုးတွေပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းများအားကူညီပံ့ပိုးသောသူများဖြစ်ကြပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ရုန်းကန်မှု၏လိုအပ်ချက်အားလုံး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုန်းကန်မှု၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြင့်နေ့စဉ်ကိုယ်ကျိုးစွန့်စွန့်လွှတ်သောလူများသည်။ ငါတို့ပြည်သူတွေဟာအနာဂတ်ကိုနှင့်ငါတို့အောင်ပွဲ၏သေချာပေါက်ကိုအာမခံသည်။ နောက်အင်အားတစ်ခုကငါတို့နှင့်အတူရှိတယ်။ အဲဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းလုံးမှုရဲ့အင်အားပဲ။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျငါကသက်သေ။ ငါအင်ဂိုလာမှအမျိုးသားရေးဝါဒီများနှင့်အတူစည်းရုံးခဲ့သည်။ အင်ဂိုလာနိုင်ငံ၊ လူဝန္ဒါ၊ မြောက်၊ တောင်၊ အရှေ့၊ အနောက်မှာပေါ်တူဂီကိုလိုနီနယ်ချဲ့မှုအောက်မှာလူတွေကွဲပြားနေတာကိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး။
ဒီတိုင်းပြည်အတွင်းမှာကျွန်တော်သက်သေခံတယ်၊ MPLA အပြင်အခြားမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုမှငါမသိခဲ့ဘူး။ ဟုတ်ကဲ့ချစ်လှစွာသောသူငယ်ချင်းများ အဲဒီမှာအင်ဂိုလာအမျိုးသားရေးဝါဒီတွေကွဲပြားနိုင်ပေမယ့်ငါတို့ပါတီအတွက်တော့မရှိပါဘူး။ CONCP မှာငါတို့အတွက်အင်ဂိုလာအပြင်ဘက်မှာပဲရှိတယ်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစ်ကိုဒေါက်တာ Agostinho Neto ၏အခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်စေသောပြည်ပရှိ MPLA ကိုယ်စားလှယ်များ၏စွမ်းအားကိုဖြစ်စေသည်။ MPLA သည်အင်ဂိုလာလူမျိုးများသူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်၌စည်းလုံးညီညွှတ်နေသည်ကိုမသေချာလျှင်၊ MPLA ၏ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကအာဖရိက၌မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသောဤပြောင်းလဲမှုများအားလုံးအောင်မြင်ရန်အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုကိုမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်မည်နည်း။ Angola ရှိလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲအတွက် MPLA အား MPLA အားခိုင်မာသည့်အထောက်အပံ့များပေးရန် MPLA အား OAU ကဲ့သို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုမည်သို့ ဦး ဆောင်မည်နည်း။
ငါတို့ရဲ့အားသာချက်ကတော့စည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်တယ်။ မိုဇမ်ဘစ်မှာစည်းလုံးမှု၊ တိုင်းပြည်အတွင်းမှာစည်းလုံးညီညွှတ်မှု၊ တိုင်းပြည်ပြင်ပမှာစည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြင့်ဘာသာပြန်ဆိုထားသောစည်းလုံးညီညွတ်မှုဆိုတာမိုဇမ်ဘစ်အတွင်းမှာဖြစ်နေတာတွေကိုထင်ဟပ်စေတယ်။ ဒီမှာ FRELIMO ၎င်း၏အပြင်ဘက်ထိုင်ခုံရှိပါတယ်။ FRELIMO သည်မိုဇမ်ဘစ်ပြည်သူများ၏ခိုင်မာသောစည်းလုံးမှုနှင့်နေ့စဉ်ခိုင်မာမှုကို အခြေခံ၍ စည်းလုံးမှုပြproblemsနာများကိုမဖြေရှင်းနိုင်ရန်အလွန်ကံကောင်းခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်ရန်သူစိတ်ပျက်အားလျော့မထားဘူး။ ရန်သူကအမြဲနိုးနိုးကြားကြားရှိသည် မိုဇမ်ဘစ်၏ရုန်းကန်မှုအရှိန်အဟုန်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အာဖရိကနှင့်ကမ္ဘာကိုမိမိကိုယ်ကိုပြဌာန်းရန်စတင်သည့်အချိန်၌ပင်မိုဇမ်ဘစ်လှုပ်ရှားမှုများ၏မွေးဖွားမှုအစကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ဤနေရာ၌ CONCP ကိုယ်စားအထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပါတီကိုယ်စားကိုယ်စားပြုပြီးဤအောင်မြင်မှုများသည်အောင်မြင်မည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အာမခံနိုင်သည်။ နယ်ချဲ့ဝါဒ၏အပြုအမူများကိုကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာနားလည်ကြသည်။ ပေါ်တူဂီကိုလိုနီစနစ်၏ပရိယာယ်အမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာနားလည်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်အာဖရိကကိုချစ်တယ်၊ လူသားကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်၊ တိုးတက်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှုကိုချစ်မြတ်နိုးပါစေ၊ ပေါ်တူဂီကိုလိုနီနယ်ချဲ့မှု၏သေးငယ်သည့်လှုပ်ရှားမှုများကိုဖန်တီးရာတွင်ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်၊ ထောက်ပံ့နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, San Thoméအတွက်ယူနစ်။
၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ပေါ်တူဂီကိုလိုနီဝါဒီများသတ်ဖြတ်သည့်နေ့တွင်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၄ တွင်လည်းအင်ဂိုလာနိုင်ငံပုန်ကန်မှုကဲ့သို့ပင်၊ ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ လူပေါင်း ၆၀၀၀၀ ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်အောက်မခံချင်ကြဘူး၊ San Thoméမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာဒီရုန်းကန်မှုမှာငါတို့ရဲ့လေးစားမှုကိုခံထိုက်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ဂီနီပင်လယ်ကွေ့ရှိအလွန်သေးငယ်သောကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သော်လည်း San Thoméမှလူများသည်ပေါ်တူဂီကိုလိုနီအုပ်ချုပ်မှုကိုပုန်ကန်ရန်ပထမဆုံးဥပမာပေးခဲ့သည်။ ဟုတ်တယ်၊ San Thoméကိုလည်းသိတယ်၊ San Thoméမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူတွေဟာစည်းလုံးညီညွတ်ကြတယ်၊ လူမှုရေးအလွှာအားလုံးဟာပေါ်တူဂီကိုလိုနီစနစ်ကိုဆန့်ကျင်တယ်။
သူတို့သည်ငါတို့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှု၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင်နိုင်ငံရေးအရသတိအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် CONCP တွင်ပြင်ပမှလူတစ် ဦး သည်သူတို့လိုချင်သောဘဝကိုလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ သူတို့လိုချင်သောအားလပ်ရက်များကိုသုံးခြင်း၊ San Thomé၏ခေါင်းဆောင်များဟုပြောဆိုခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့၏ဘဝကိုနေထိုင်ကြောင်းဝန်ခံရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ San Thoméပြည်သူလူထု၏ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတိုးတက်မှုကိုနှောင့်နှေးစေခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ပါ။ CONCP သည်တစ်ချိန်တည်းမှာမိုဇမ်ဘစ်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီမှတစ်ဆင့်မိုဇမ်ဘစ်လူမျိုးတို့၏ရုန်းကန်မှုကိုဖျက်ဆီးရန်ကြိုးပမ်းမှုများ၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ညီ Mondlane ပြောကြားသကဲ့သို့ CONCP သည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်များအားရှုတ်ချပြီးမိုဇမ်ဘစ်လူမျိုးများ၏ရုန်းကန်မှုမှဖယ်ထုတ်ရန်ရဲရင့်စွာစီမံနိုင်ခဲ့သည်။ အခြားလူများနှင့်လည်းကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်။ PA1GC မှ၊ ကျွန်ုပ်သည် PAIGC ခေါင်းဆောင်အနေဖြင့်မနက်ဖြန်တွင် CONCP အတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်သူလူထု၏အကျိုးစီးပွားကိုသစ္စာဖောက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်ကိုထုတ်ပယ်ရန်အရာအားလုံးကိုလုပ်ပါ၊
ဟုတ်ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီဂီနီနှင့်ကိပ်ဗာဒီကျွန်းစုများတွင်လည်းစည်းလုံးမှု။ ကျနော်တို့အများကြီးအကြောင်းပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လူ ဦး ရေ ၈၀၀,၀၀၀ နှင့်ကျွန်းသူကျွန်းသား ၂၀၀,၀၀၀ တို့သည်သေးငယ်သောလူ ဦး ရေသည်ကီလိုမီတာ ၅၀၀ ခန့်ခြား။ ပျံ့နှံ့သွားနိုင်သည်။ ကီလိုမီတာ ၄၀,၀၀၀ ရှိသည့်သေးငယ်သည့်တိုင်းပြည်၊ နိမ့်ကျသောတိုင်းပြည်၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမည်သို့ဖြစ်နိုင်ပါမည်နည်း။ ပေါ်တူဂီစစ်သား ၂၀,၀၀၀ ကိုသိမ်းပိုက်ထားသော၊ ခေတ်သစ်စစ်ဆင်ရေးအတွေ့အကြုံတစ်ခါမျှမရှိခဲ့ဖူးသောတိုင်းပြည်သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်လူမျိုးစုများအဖြစ်ခွဲခြားထားခြင်းခံရပြီးကိုလိုနီနယ်ချဲ့များကိုအနိုင်ယူရန်မည်သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ ပေါ်တူဂီကကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်တယ်၊ တစ်နှစ်အတွင်းတိုင်းပြည်ရဲ့ထက်ဝက်ခန့်ကိုလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတစ်ခုကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်မလား။ ငါတို့စည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ မဟုတ်ဘူး။ ငါတို့စည်းလုံးမှုအကြောင်းပြောဖို့အချိန်မဖြုန်းတီးကြစို့နဲ့။ ဂီနီနဲ့ကိပ်ဗာဒီကျွန်းစုမှာငါတို့လူမျိုး၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုအခိုင်မာဆုံးသက်သေပြနိုင်ခြင်းကငါတို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲရဲ့တောက်ပတောက်ပသောအောင်မြင်မှုဖြစ်သည်။
ဒီနေရာမှာလည်းဌာနခွဲမှာကြိုးစားမှုတွေရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်ကိုင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲကိုစိတ်မ ၀ င်စားသူတွေကတော့ငါတို့ပါတီရဲ့ရန်သူတွေဖြစ်လာပြီးနိုင်ငံပြင်ပမှာရှိတဲ့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖန်တီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့တောင်မှရှေ့တန်းတီထွင်ခဲ့ပေမဲ့တိုင်းပြည်နဲ့သိပ်ဝေးတယ် ကျနော်တို့ဆွေးနွေးကြပြီမဟုတ်, ငါတို့အပြင်ဘက်ကနေဒီသေးငယ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုများကိုတိုက်ဖျက်ဖို့မှာအားလုံးစာရွက်စာတမ်းများထုတ်ဝေကြပြီမဟုတ်။
ငါတို့တိုင်းပြည်အတွင်းမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ငါတို့ပြည်သူတွေရဲ့လူကြိုက်များတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်၊ ချုံပုတ်ထဲမှာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့တယ်၊ ငါတို့ပြည်သူတွေရဲ့အဖိုးတန်ဒြပ်စင်တိုင်းကိုအသုံးချပြီး၊ လက်နက်ကိုင်ဆောင်တယ်၊ ရွာတွေ၊ မြို့တွေကိုစည်းရုံးတယ်၊ ငါတို့အိမ်မှာစောင့်နေတယ်၊ ​​ပေါ်တူဂီကိုလိုနီနယ်ချဲ့တွေရဲ့စစ်ရေးအရရောနိုင်ငံရေးအရရောသာမကပြင်ပကလာတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပါရောက်လာတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာပဲဒီလူတွေဟာဘယ်သူ့ကိုမှတိုက်ခိုက်ဖို့၊ တိုက်ခိုက်ဖို့အချိန်မရှိဘူး၊ ဒီလှုပ်ရှားမှုအားလုံးဟာလုံးဝပြိုကွဲသွားပြီ။ စကားလုံးများကြောင့်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်၏တိကျသောအဖြစ်မှန်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် CONCP ၏အသင်း ၀ င်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပါတီသည်အခြားကိုလိုနီနယ်မြေများအတွင်းတိုက်ခိုက်နေကြသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ညီအစ်ကိုများအားလုံးကိုပြောရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ပြင်ပမှာ။
လူများနှင့်လူထုများကိုစည်းရုံးခြင်း၊ လူကြိုက်များသောလူထုများအတွင်းနေထိုင်ခြင်း၊ လူကြိုက်များသောလူထုများနှင့်အတူတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ နေရာတိုင်း၌စုရုံးခြင်းနှင့်လူတို့အားပြသခြင်းဖြင့်အချိန်ကိုအချိန်ကုန်သက်သာစေရမည်။ သူပထမ ဦး ဆုံးတိုက်ပွဲအနိုင်ရတစ် ဦး တည်းသောကြောင့်နေ့, တိုက်ပွဲဝင်ရကျိုးနပ်သည်။ ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ CONCP နဲ့ငါတို့ပါတီကိုယ်စားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုန်းကန်မှုအလားအလာကိုလည်းပြောရမယ်။ ငါတို့သူငယ်ချင်းတွေကသူတို့ကူညီချင်တာ၊ အကူအညီကိုပိုပေးချင်လို့သိချင်ကြတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်သူများသည်သူတို့အစီအစဉ်များကိုပြုပြင်လိုသောကြောင့်လည်းသိလိုကြသည်။ အင်ဂိုလာရှိမိုဇမ်ဘစ်နှင့်ဂီနီတွင်တိုက်ပွဲ၏အလားအလာမှာကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုးများ၏နိုင်ငံရေးသြတ္တပ္ပစိတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းလုံးမှုကိုနေ့စဉ်ခိုင်မာစေရန်နှင့်အဆင့်တိုင်းတွင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကိပ်ဗာဒီကျွန်းစုမှာလည်းငါတို့ပါတီက ဦး ဆောင်သူတွေဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဂီနီနဲ့ကိပ်ဗာဒီကျွန်းစုတွေမှာအတူတူပဲ။ ကိပ်ဗားဒီကျွန်းစုကိုအခြေခံအားဖြင့်ဂီနီနိုင်ငံကပြန်ပေးဆွဲခံကျွန်တွေနေထိုင်ကြရတယ်၊ ငါတို့မှာလည်းတူညီတဲ့ကံကြမ္မာရှိတယ်၊ ငါတို့မှာဘာသာစကားတစ်ခုတည်းရှိတယ်၊ ပါတီတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်၊ ကိပ်ဗာဒီကျွန်းစုတွေမှာတိုက်ပွဲအလားအလာလည်းရှိတယ်။ ရုန်းကန်မှုအသစ်အဆင့်သို့ရောက်ရန်လုံလောက်သောအဆင့်အထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သောလူထုများ၏နိုင်ငံရေးစိတ်ကိုနေ့စဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်။
တက်ကြွစွာပေါ်တူဂီကိုလိုနီဆန့်ကျင်pourdéclencherလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရန်ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်သည်ကျနော်တို့ကကိပ်ဗာဒီကျွန်းစုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေ ပြင်ဆင်. , ကျနော်တို့ကိုသင်တို့ရှေ့မှာကဒီမှာကြေညာနှင့်ယခု CONCP အတွက်သန့်ရှင်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့ကနေ့နှင့်နာရီကိုပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါတို့မူကားထိုသို့ပြုကြမည်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုအသိပေးပါ၊ သူတို့လည်းပြင်ဆင်နေကြပါပြီ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ကသေချာတာကဘာတာစတာနှင့်သူအေးဂျင့်များ၊ နယ်ချဲ့ဝါဒ၏ကျွန်များနှင့်နယ်ချဲ့ဝါဒကိုယ်တိုင်ကမသေချာဘူး ကျူးဘားတွင်တိုးတက်မှုရှိသောအင်အားစုများကျူးဘား၌အောင်ပွဲကိုရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့သည်။
ကိပ်ဗာဒီကျွန်းစုများ၌လည်းကျွန်ုပ်တို့သမိုင်းကြောင်းတွင်အကြီးအကျယ်ခံစားခဲ့ရသောငါတို့လူမျိုးများ၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ပေါ်တူဂီကိုလိုနီနယ်ချဲ့ဝါဒီများကိုအနိုင်ယူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတိမြေမှမြေယာမှအတိအကျမောင်းထုတ်နိုင်လိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိလိမ့်မည်။
တိုင်းပြည်တိုင်းတွင်သာမကပေါ်တူဂီကိုလိုနီလူမျိုးများအကြား၌ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုခိုင်မာအောင်ပြုလုပ်ရမည်။ CONCP သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အထူးအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ငါတို့မှာတူညီတဲ့ကိုလိုနီအတိတ်ရှိတယ်၊ ငါတို့အားလုံးဟာပေါ်တူဂီစကားတတ်ကျွမ်းတတ်အောင်သင်ယူခဲ့ကြပေမဲ့ပိုပြီးအင်အားကြီးတဲ့သမိုင်းဝင်အင်အားတစ်ခုရှိတယ်၊ ငါတို့အတူတကွတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ ရဲဘော်ရဲဘက်များနှင့်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်အတွက်အပေါင်းအဖော်များကိုရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။ CONCP သည်ငါတို့အတွက်တိုက်ပွဲ၏အခြေခံအင်အားဖြစ်သည်။
CONCP သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်၊ မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံ၊ အင်ဂိုလာရှိတိုက်လေယာဉ်အားလုံး၏နှလုံးသား၌ရှိသည်။
CONCP အနေဖြင့်လည်းအာဖရိကန်ပြည်သူများအတွက်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူမိသည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအာဖရိကမှာနယ်ချဲ့ဝါဒနဲ့ကိုလိုနီစနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဒီဘုန်းတော်ကြီးလှတဲ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုထဲရောက်နေလို့ပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးကိုလိုနီတွေအတူတကွဆွေးနွေးဖို့၊ အတူတကွစီစဉ်ဖို့၊ အတူတကွစီစဉ်ဖို့၊ ၎င်းသည်အာဖရိကသမိုင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုးတို့၏သမိုင်းအတွက်အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအလှူငွေဖြစ်သည်။ CONCP မူဘောင်အတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သောအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့မဆုံးရှုံးနိုင်ပါ။ ဤကွန်ဖရင့်ကိုတိကျသောရလဒ်များဖြင့်ထွက်ခွာရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ချစေသည်။ ကျနော်တို့ဒီကနေထွက်ပြီးညှိနှိုင်းတဲ့နည်းနဲ့တိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့သန္နိare္ဌာန်ချထားပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ ငါတို့၏နိုင်ငံများတွင်ပေါ်တူဂီကိုလိုနီနယ်ချဲ့မှုစုစုပေါင်းကျဆုံးခြင်းကိုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ရုန်းကန်မှုအဆင့်သစ်တွင်ရှိနေသည်။ မျက်နှာစာသုံးခုတွင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများရှိသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပါတီတစ်ခုချင်းစီအတွက်ဖြစ်စေ၊ CONCP တစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်စေပိုမိုတာ ၀ န်ယူမှုရှိသည်။ သို့သော်၎င်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်ညီအစ်ကိုများအတွက်ပိုမိုတာ ၀ န်ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အာဖရိကကပြtheနာကိုဂရုစိုက်ရမယ်။ ဟုတ်တယ်၊ အာဖရိကကအာဖရိကကိုကူညီတယ်။
ဒါပေမယ့်အာဖရိကကကျွန်တော်တို့ကိုအလုံအလောက်မကူညီဘူးလို့ထင်တယ်။ အာဖရိကတိုက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားများစွာကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုထင်မြင်ယူဆပါသည်။ အကယ်၍ အာဖရိကသည်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်ပေါ်တူဂီကိုလိုနီစနစ်ကိုတိုက်ဖျက်ရေး၏တန်ဖိုးနှင့်အရေးကြီးမှုကိုအတိအကျနားလည်နိုင်လျှင်၊ အက်ဒစ်အဘာဘာအပြီးနှစ်နှစ်အကြာတွင်အာဖရိကခေါင်းဆောင်များ၏နောက်ထိပ်သီးညီလာခံသည်ဂီနီ၊ ကိပ်ဗား၊ စန်ကျွန်းစုမှတိုက်ခိုက်သူများအားအာဖရိကမှအကူအညီများကိုထိရောက်စွာခိုင်မာစေရန်ခိုင်မာသောအစီအမံများပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည် မိုဇမ်ဘစ်နှင့်အင်ဂိုလာမှThorné။ အခြားတစ်ဖက်မှကြည့်လျှင်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်အထူးသဖြင့်ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံများမှသူငယ်ချင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုန်းကန်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်သူတို့၏မိခင်ဘက်မှကူညီမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပါဝင်ကြောင်းသေချာပေါက်သတိပြုမိကြသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့တိုင်းနှင့်ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံများ၏အင်အားစုများနှင့်အနောက်နိုင်ငံများ၏တိုးတက်သောအင်အားစုများသည်သူတို့၏ရုန်းကန်မှုတွင်သူတို့၏အကူအညီ၊ နိုင်ငံရေး၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများအားမည်သို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ကို၎င်း၊ ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုနေ့စဉ်သိရှိလာကြလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ဒီစကားလုံးတွေနဲ့အဆုံးသတ်သွားမှာပါ။ အိမ်မှာ၊ ပေါ်တူဂီဂီနီနဲ့ကိပ်ဗာဒီကျွန်းစုတွေမှာကိုလိုနီနယ်မြေတပ်တွေဟာနေ့စဉ်ယုတ်လျော့နေတယ်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုလိုနီတပ်များကိုတိုက်ခိုက်လိုပါကစစ်တန်းလျားတွင်သူတို့၏အိမ်သို့သွားရန်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီမှာငါတို့ပေါ်တူဂီကိုလိုနီကိုအဆုံးသတ်ရတော့မယ်။ ချစ်လှစွာသောရဲဘော်ရဲဘက်များနှင့်မိတ်ဆွေများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုဇမ်ဘစ်တွင်မကြာမီထပ်တူဖြစ်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သေချာသည်။ ဤရွေ့ကား, အချို့သောဒေသများရှိဖြစ်ပျက်စတင်နေသည်။ အင်ဂိုလာမှာအတူတူဖြစ်လိမ့်မည် ဤရွေ့ကားပြီးသား Cabinda ၌ဖြစ်ပျက်စတင်နေသည်။ ပေါ်တူဂီကိုလိုနီနယ်ချဲ့ဝါဒီတွေကငါတို့ကိုကြောက်လာပြီ။ သူတို့ဟာအခုသူတို့ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဒီမှာရှိနေရင်သူတို့မှာဒီမှာအေးဂျင့်တွေမရှိဘူးဆိုတာငါစိတ်ချတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီမှာရှိနေရင်ငါတို့ကိုမြင်မယ်၊ တန်ဇန်းနီးယားအစိုးရမှအရံအဖွဲ့များမှကြိုဆိုခြင်းကိုမြင်တွေ့ရသောကိုယ်စားလှယ်များသည်ပေါ်တူဂီကိုလိုနီနယ်ချဲ့ဝါဒီများ၏ကြောက်ရွံ့မှုများသည်ပိုမိုကြီးမားလာလိမ့်မည်။ သို့သော်ရဲဘော်ရဲဘက်များနှင့်ညီအစ်ကိုများသည်ပေါ်တူဂီကိုလိုနီနယ်ချဲ့နေရာတိုင်း၌လက်နက်များကိုင်။ သွားကြကုန်အံ့။ ကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့ဆက်သွားကြပါစို့ဖျက်စီး။ ပေါ်တူဂီကိုလိုနီစနစ်၏ဆုတ်ယုတ်သောအင်အားစုများမှကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံများကိုလျင်မြန်စွာလွတ်မြောက်စေကြပါစို့။ ဒါပေမယ့်ငါတို့တိုင်းပြည်မှာကိုလိုနီစနစ်ပုံစံအသစ်တစ်ခုကို install လုပ်ဖို့၊ နယ်ချဲ့ဝါဒပုံစံတစ်မျိုးမျိုးကိုခွင့်မပြုဖို့၊ neocolonialism ကိုခွင့်ပြုဖို့နေ့တိုင်းပြင်ဆင်ကြပါစို့။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနှင့်အာဖရိကတွင်ဤကင်ဆာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ကိုမရောက်ရှိနိုင်အောင်ကင်ဆာဖြစ်လာသည်။